PSJTV | पानी परेको रात - मन्दिरा मधुश्री
बिहिबार, १४ असार २०७५ पिएसजे साहित्य
सात दिन सम्मको अविरल बर्षा पछि पानी रोकिएको थियो । सधैँ सुत्ने खहरे पनि केही दिन सम्म त डङ डङ गरेर उर्लिए । जता ततै पाखाहरू सोहोरिए । घरहरू पनि बगे,पुरिए । सुतेको ओच्छ्यान र मझेरी नै चिहान भए धेरैका । धेरैका घर बगे,खेत बगे,गोठ बगे । धानको बिउ बग्यो । सर्वस्व स्वाहा भयो धेरैको ।
आठ दिनका दिन पानी ठ्याम्मै रोकियो । टन्टलापुर घाम लाग्यो । अलिकति राहत मिलेको थियो सबैलाई घाम लाग्दा । बग्नबाट बचेका आँगनहरू अलिककति अख्रेका थिए । सकिएका खानेकुराको जोहो गर्न पाएका थिए सबैले । सरकारी टोलीले पनि बाढी पीडित क्षेत्रमा केही राहत बाँड्न पाएका थिए ।
पानी रोकिएको दुई दिन पछि वा दशौँ दिनको बेलुका खेरि एक्कासी आकाश थर्कियो । कालो बादल मडारियो र देखिएको जति आकाश पुरै ढाक्यो । बिजुली चम्कन थाल्यो । बेला बेलामा चट्याङ पनि हान्यो । धेरै बेरको सङ्घर्षपछि अन्ततः हार्यो आकाश पनि । निकै सङ्घर्ष गर्दापनि अपहरणकारीबाट बलात्कृत भएकी विवश महिला लाचार भएर एउटा अन्त्य भएको आफ्नो अस्तित्व अनि अर्काे सुरु भएको अस्तित्वको विश्लेषण गरेर रोए जसतै धुरुधुरु रोयो आकाश पनि । घनघोर बर्षाद हुन थाल्यो फेरि । अगुल्टाले हानेको कुकुर जस्तै डराएका थिए सबै गाउँलेहरू । केहीदिन अघि आफ्नै आँखा अगाडिको वीभत्स र कहाली लाग्दो दृष्य झलझली भईरहेको थियो सबैमा । पुर्नताजगी भयो सबैमा वर्षादको त्यो दृष्य । पुनः सम्भाव्य घटनाको परिकल्पना गर्न थाले सबै । सबैको मुटुले ठाउँ छोड्न थाल्यो । सबैका कानमा केही दिन अघि आफ्नै आँखा अगाडि वरिपरिको पाखा सँगै बगेका आफन्त र छरछिमेकिहरूको बचाउ, बचाउ भन्ने पीडित चित्कार अझै पनि कानमा गुन्जिरहेकै थियो । आफन्त वियोग र सम्पत्तिको सर्वनाशमा चित्त बुझाई सकेकै थिएनन्,कसैका पनि आँखा ओभानो भईसकेकै थिएनन् । अस्ति बाँचेकोमा सबैलाई पश्चाताप लागिरहेको थियो । बरु त्यतिखेरै जान पाएको भए पनि त फेरि पनि यो दृष्य त देख्नु पर्नै थिएन,खेप्नु पर्ने त थिएन । हेर्दा हेर्दै पानी पर्न थालिहाल्यो झमझम ।
राहतमा पाएको चार किलो पीठो लिएर ऊ भर्खर मात्र आएको थियो । झमक्क साँझ पर्न लागेको थियो । कालो बादलले झन छिटो छिटो अँध्यारो बनाईदिएको थियो । ऊ दलानको तल्लो छेउको आँटमा वसेको थियो । उसलाई बिँडीको तलतलले सतायो अनि छानामा सिउरेको सालको टपरी निकाल्यो र एउटा बिँडीलाइ पुग्ने टुक्रा च्यात्यो । अस्कोटको भित्रि गोजिमा राखेको सुर्ती निकाल्यो र बिँडी बेर्याे । अनि त्यही गोजिमा राखेको झुलो,चकमक र दर्शीन ढुङ्गा झिकेर ठोस्न थाल्यो आगो पार्न । धेरै दिनको झरीको चिसोले ओसिएको थियो क्यारे झुलो निकैबेर ढुङ्गा र चकमक मात्र ठोकिएर भिलिक झिलिक गरिरह्यो । झुलोले टिप्न सकेन आगो । त्यसपछि उसले मुखमा च्यापेको बिंडी कानमाथि सिउरियो । झुलोलाई मुखले फुकेर तातो बनायो । एकक्षण हत्केलामा राखेर रगड्यो अनि पुःन ढुंगामाथि राख्यो र चकमक ठोस्न थाल्यो । बल्ल बल्ल आगो टिप्यो झुलोले । उसले ठान्यो, अब अलिकति यही आगो जोहो गरेर राखेन भने राती अँध्यारोमा झन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले धूवाँ आउंदै गरेको अलिकति झुलो च्यातेर बिँडीको टुप्पोमा राख्यो र ओठबाट आवा भित्र तानेर ँिंडी सल्कायो । बाँकी झुलो खैनीको बट्टाभित्र बन्द गरेर जतनसित अस्कोटको भित्रि गोजिमा नै राख्यो ।
पानी झमझम परिरहेकै थियो । बलँेसीमा झरेको पानी उछिट्टएर ऊ बसेको ठाउँतिर पनि चीसा स साना छिटाहरू आइरहेका थिए । बिंडी खाँदै उसले पानी परेको हेरिरह्यो एकोहोरिएर । उसको दुःख सुखको एउटै सहयात्रीे पाँग्रे कुकुर पनि पानीले सबैतिर भिजेकोले पुच्छर भुर्इंमा अड्याएर दुई खुट्टा टेकेर उसँगै टाँसिएर बसिरहेको थियो । घरि मालिकको मुखतिर र घरि पानी परेकोतिर हेर्दै । उसका मुखमा पनि शव्द भए ,जुवान भए ..सोध्ने थियो होला उसलाई सायद,“मालिक ! अब त यो पानी पनि कस्का लागि पो आवस्यक छ होला र हगि ?”
उसलाई आजको पानीले एकवर्ष अघिको त्यो दिनको याद झुलुक्क भयो । ऊ पानी परेको हेरेर टोलाइरह्यो । त्यो दिनलाई ऊ कहिले पो विर्षन सक्छ र ...। चाहेर पनि विर्सन सक्दैन ऊ ।
त्यस दिन पारिघरको रोपाइँको मैझारो गर्ने दिन थियो । ऊ बाउसे गर्न र आलि लगाउन कहलिएको थियो गाउँमा । उसले बाउसे गरेको ठाउँमा मात्र रोप्न मन पराउँथे रोपाहार पनि । त्यसैले पनि उसको छुट्टै माग हुन्थ्यो । रोपाहार खेतालो भन्न जाँदा ने महिलाहरू भन्ने गर्थे “बाउसे चाहिँ उसैलाई नै बोलाउनु है ...।”
त्यस दिन पनि ऊ खेतालो गएको थियो पारिघरको । त्यो पनि रोपाहारहरूको नै माग भएर ...।
खोलावारी उसको घर थियो र खोलापारि अलिकति डाँडामा पारिघर । अलिक तलतिर खेत । उसको घरको अँगेनाको डीलबाट नै पारिघरको खेतमा काम गरेको मज्जाले नै देखिन्थ्यो । एक अर्का पट्टि आमुन्ने सामुन्ने जस्तो भएर फर्किएका थिए दुवै घरहरू । दुई घरको वीचमा अलिकति खेत र सानो खोल्सो थियो । त्यसैले पनि त्यो घर पारिघर भएको थियो ।
उसको घरमा ऊ र उसकी जहान बाहेक नजिकको आफन्त भनेको कालेकुकुर मात्र थियो । तर त्यतिखेर त त्यो भन्दा पनि आफन्तको आगमन भएको थियो उसको घर आँगनमा वा भनौँ जिन्दगीमा नै । सधैँका लागि बास माग्न । स्थाई पाहुना भएर । उसकी जहानले एउटी कोमल फूलजस्ती छोरी पाईदिकी थिई ।
जहान भर्खरकी सुत्केरी नै थिई । ऊ बनिबुतो,मेलापात गरेर ल्याउँथ्यो । सर्जाम जुुटाउँथ्यो । खुवाउँथ्यो । रमाईलो थियो जिन्दगी । अघिल्लो साल मात्र यही रोपाइंके समयमा उसले भगाएको थियो उसकी जहानलाई । उसको एक्लो जिन्दगीमा सबैथोक बनेर आएकी थिई उसकी जहान पनि । खुसी नै खुसीमा एकवर्ष बितिसकेको थियो उसको । दोहोरो संवाद गर्ने,माया गर्ने आफन्त पाएको थियो उसल े। जति माया गरे पनि ..लुटुपुटु गरे पनि...चाटे पनि ...कालेसँग दोहोरो संवाद थिएन । जुवान थिएन । संवाद विहीन माया भन्दा संवाद भएको मायामा धेरै अन्तर पाएको थियो उसले । त्यसैले पनि ऊ दंग थियो । आफ्नै जीवनमा आएको खुशियालीले गर्दा...। यसपालि उसको खुसी दोब्बर पारिदिएकी थिई उसकी जहानले ।
त्यसदिन किन किन कसैको पनि मेला जाने मन थिएन उसलाई । ऊ जहानसंग गफ गरेर छोरी खेलाएर दिनभरि घरैमा बस्न चाहन्थ्यो । त्यसैले पारिघरे दाईले आफै आएर बाउसेका लागि खेतालो भनेर गए पनि उसले भने मानेको थिएन । तर रोपाहारहरू आफै लिन आए अनि त नगई धरै पाएन उसले ।
मेला नगई नहुने भएपछि उसले छिटोछिटो गर्न थाल्यो घरको काम । सुत्केरीको लागि चाम्रे पकाउनै थिायो । बिहानै भिजाइराखेको थियो चामल । कराई बसाएर पहिले ज्वानो उमाल्यो । डबकामा ज्वानोको झोल खन्यायो र त्यही कराहीमा चाम्रे पकायो । बारीबाट पुदिना टिपेर ल्यायो र खुर्सानी नहालिकनै अचार पिंधिदियो । अनि सुत्केरीलाई खान दियो । फेरी डबकामा गाग्रोमा जोहो गरेर राखेको चामल खन्यायो र दिउंसोको लागि भनेर भिजायो । अनि एकचोटि छोरीलाई हेर्याे । सुम्सुम्यायो । म्वाइँ खायो । कलिलागालामा उसका जर्खरिएका ठुटे जुँगाले बिजायो क्यारे,निदाइरहेकी छोरी यसो चल्मलाई । अनि दिँंसो खाजा खाने छुट्टीमा भात पकाईदिन आउँछु है भन्यो जहानलाई र हिँड्यो । ऊ गएको हेरिरही उसकी जहानले केही नबोलिकन ...। सायद उसमा कुनै बोल्ने शव्द नै पो थिएन कि...।
दिनभरि उसको मन काममा भन्दा पनि घर तिरै थियो । छोरी र जहानको याद आइरह्यो उसलाई । दिउँसो खाजा खाने बेलामा ऊ भटेको मकै,गहुँ भटमास् अनि गहुंको पानी रोटी र आलुका चाना टोपीमा थापेर चपाउँदै लाग्यो घरतिर । घरपुगेर छिटो छिटो चाम्रे पकायो । ज्वानो उमाल्यो अनि जहानलाई खान दियो । ऊ भने छोरी खेलाउन थाल्यो । अरुका सान साना बच्चा देख्दा त उसलाई घीन पो लाग्थ्यो । तर यो त आफ्नै रगत भएर पो हो कि केही घीन लागेन । बरु गाला पो जोडिरहन पो मन लाग्यो उसलाई ।
जहानलाई चाम्रे थपिदिन खोज्दा उसलाई पनि खान कर गरी । अलिक निकै पनि थियो चाम्रे । उसले पनि टार्न सकेन जहानको आग्रहलाई ।
जहानले फेरी भनी — “ज्वानो पनि पिउन ...। सर्दी पो जान्छ त ज्वानोले । दिनभरि पानीमा खेल्छौ, चिसोले ज्वरो आउन लागिसक्यो । थला पर्याै भने त मलाई कसले खुवाउंछ र फेरि...?”
मायालु र हार्दीक लाग्यो उसलाई जहानको यो आग्रह वा अनुरोध । ऊ प्रतिको माया र आफ्नो चिन्ता समेत थियो जहानको अनुरोधमा ।
“हो त नि है,केही गरी म नै बिरामी भएर थलिएँ भने त कसले पो खान दिन्छ र यसलाई ? यसको सम्पूर्ण आड,भरोसा,आधार भनेकै मै त हुँ नि..। यो र काले त दुवै उस्तै उस्तै त हुन नि ..। निरिह ..। यसमा संवाद गर्ने शव्द छ कालेमा छैन फरक त्यत्तिमात्र त हो ।
उसले पुुलुक्क जहानको मुखमा हेर्याे । चार आँखा भए दुवैका । सुत्केरी शरीर,अलिअलि सुन्निएर मोटाए जस्ती देखिएकी ...। आँखा अलिकति धसेका चिसोले..। कलिलो देखिएको थियो अनुहार पनि टीठ लाग्दो । हेरिरह्यो उसलाई ।
“के हेरिरहेको नि,कहिल्यै नदेखे जस्तो ? खाउँला झंै नै गरेर..।”उसकी आफ्नै जहान नै भए पनि लोग्नेको एकोहोरो हेराई देखि शर्माई ।
“छोरीको कशम..। छोरी पाएपछि त तं झनै राम्री पो देखिएकीछेस् है बाबै..। ” यो सुनेर झन राता भए जहानका गाला । उसले थाम्न सकेन आफूलाई ..। अनि देब्रे हातले छेउमा बसेकी जहानलाई अँगालो हाल्यो र आफूतिर ढल्कायो अनि च्वाक्क म्वाइँ खाइदियो गालामा ।
“छि..जुठै मुख छ हेर न पात्तिएको ।”
जहानले प्रतिकार हैन नखरा गरी ।
“मुख जुठै त हुन्छ नि सधैँ ।” ऊ पनि जिस्कन खोज्यो । ठस्स सुत्केरी गन्हाए पनि आज उसले जहानमा अर्कै ख
ालको मीठो गन्धको अनुभूति गर्याै । ढोकामा बसेर टुुलुटुलु गांस गनिरहेको काले चुँइकियो । “मैले माया गरेर चाट्न खोज्दा त जुठो लगाईदियो भनेर कुट्थ्यौ त ...।” कालेले यही व्यङ्ग्य गरेजस्तै लाग्यो उसलाई ।
उसले पुःन एकक्षण छोरी बोक्यो । खेलायो । म्वाई खायो अनि हिँड्यो मेलो तिर । त्यसबेला पनि जहान र छोरी छ
ोडेर जानै मन थिएन उसलाई । ऊ गह्रौँ मन बनाएर हिँडिरह्यो । भरे फर्केर आउँदा चाहिँ सुत्केरलिाई खुवाउन एउटा कुखुरा ल्याउने निधो गर्यो उसले । छ दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म एकपटक पनि मासु खुवाउन पाएको हैन...। कति खावोस त्यो टर्राे ज्वानोको झोलपनि ...। पुःन उसको मुखमा ज्वानोको स्वाद उलुक्क भयो जुन केही क्षण अघिमात्र उसले घुट्क्याएको थियो ।
खाजा खाईसकेपछि खेतालाहरू खेतमा पसेर एक मेलो काम पनि गरेका थिएनन्,आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो । एकै क्षणमा अँध्यारो भयो । गड्याड० गुडुङ्ग गर्याे । चट्याङ्ग हान्न थाल्यो । घनघोर वर्षादको सङ्केत हुन थाल्यो । चाँडो चांढो हात चलाए सबैले । हली,बाउसे,रोपाहार सबै लागेर बनाएको ठाउँचाहिँ रोपि सिध्याए । हतार हतार खेतबाट निस्कन मात्रै खोज्दैथे,ओइरिहाल्यो पानी पनि । सबै घरतिर उक्लिए । झिमझिम वर्षा त धेरै अघिदेखि भईरखेको थियो तर ठुलो पानी भने परेकै थिएन ।
सबै खेतालाहरूलाई मैझारोको दिन बेलुका घरैमा भात खुवाउने भनेका थिउ पारिघरे दाईले र उनको यो सधैँको नियम नै थियो कि मैझारोको दिन सबै खेतालाहरूलाई खाना खुवाउने । भित्र खाना तयारी हँुदै थियो । सबै खेताला भने दलानमा बसेर गफ गरिरकेका थिए । कोहि भने उसलाई नै जिस्काउँदै थिए ।
एउटीले भनी “ल है कान्छा दाई , एउटी भए पनि रोपाहार बढाईदिएछौ,बधाई छ । ैउसको सङ्केत उसकी भर्खर जन्मेकी छोरी प्रति थियो ।
अर्कीले व्यङ्ग्य गरी..“रोपाहार त हामी जति पनि छँदै थियौँ नि ..बरु आफुजस्तै राम्रो बाउसे चाहिँ बढाको भए हुन्थ्यो नि ..।”
तेस्रीले थपी..“अर्काे साल बाउसे, हैन त दाई..?”
उसको मुख केही रातो भयो । केही बोलेन ।
“हैन कति छिल्लिएका यी केटीहरू...?” पर बसेकी अलिक पाकीले हकारी । यस्तै ठट्टा गरेर बसिराथे सबै जना ।
पानी झन ठुलो पो दर्कन थाल्यो । यसबेला उसको मनभने घरमै पुगेको थिायो । छोरी र जहानमै थियो उसको ध्यान र मन । पारिघरे दाईलाई पहिले नै कुरा राखेको थियो । उनले कुखुरा पकडेर ल्याए अनि दिए उसलाई । खुट्टा र पँखेटा बाँधिएको थियो । उडेर भागला भनेर । आज ऊ निकै खुशि थियो । जहानलाई कुखुरा खुवाउन पाउने गर्व थियो उसलाई । “आज त उतै पो जानु पर्छ कि केहो कुखुराको झोल खान..?” एउटीले मुख मिठ्याई । ै अर्काकोमा के मुख मिठ्याउंछेस् आफै पा न एउटा धोक्रे छोरो अनि यस्तो जाबो कुखुरा त कति हो कति...? ैअर्किले व्यङ्ग्य गरी ।
उसको भने आँखा घरतिरै थिए । मन आमा छोरमिा । भौगोलिक दुरी धेरै भए पाँच मिनेटको दुरी थियो । उसको मझेरीबाट कति पाइला कसरी टेकेर हिंड्दै छ त्यो पनि सबै देखिन्थ्यो । तर आजको बर्षादले पाँच मिनेटको दुरी पनि पचासौँ घन्टाको जति बनाईदिएको थियो । “थाङ्ना पनि उठाउन भ्याई कि भ्याईन होली ? सबै चीसै थिए होलान् । बिचरा सुत्केरी मान्छे...। जाडो पनि भईराखेको होला...। आगो पनि निभ्यो होला..। बाल्न पनि सकि कि सकिन...? बरु अघि नै पानी पर्न आँट्दा नै उतै मेलैबाट घरतिर जानु पर्ने रहेछ ..। थुइक्क है...। अब यो पानी रहने छाँट नै छैन ..।” अहिले पछुतायो ऊ...।
पानीको मात्रा झन बढ्दै गयो घट्नुको सट्टा । उसको मनमा पानी भन्दा पनि बढी कुरा दर्किरहेका थिए । पारिघरे दाई पनि चिन्तित देखिए । “जा है...सबै रोपो पनि पो उखेलिने भयो यो पानीले त...। कामै नलाग्ने भईहाल्यो नि...।”
एक चोटि झिलिक्क गर्याे । ठूलो आवाज सहित चट्या हान्ने डरले आवाजबाट बच्न कान थुने सबैले । अनि गड्याङ्ग...गर्याे आकाश । ठूलो चट्याङ्ग पनि हान्यो । उसको मन झन विचलित भयो । उडेर नै घर पुगिहालुँ जस्तै भयो उसलाई । उसका आँखा घरतिरै थिए ।
एक्कसी बिजुली नै नचम्किकन ‘गढ्याङ्ग’ गर्याे गाउँ नै थर्कने गरी । सबै जना त्रसित भए । सम्भावित दुर्घटनाको भयले । अब के हुने हो ? के हुन लागेको हो ? सबै अनुमान मात्र गर्दैथे । चर्रर...आवाज आयो अनि झन बढ्दै गयो आवाज । सबैका आँखा पार िपाखामा गएर ठोक्किए । उसको घरभन्दा माथिको पाखो आफ्नो अस्तित्व गाँसिएको धर्ती सँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै खुरुरुरु उंधो पो बग्न थाल्यो । उसको घर पनि त्यो पाखो संगै तल तल पो सर्न थाल्यो । सबैका आँखा भयभित थिए । उहीं थिए । सबैको मुखबाट राम राम– राम–राम ...निस्क्यो ।
ऊ उफ्रन थाल्यो । बहुला जस्तै कराउँदै ..। “लौ न नि के पो हुन आँट्यो नि... बचाओ न कोहि त हिंड न..। मेरो घर बग्यो । मेरी सुत्केरी जहान र सानी छोरी छन् घरमा...। हिंड न सबै..। बचाओ न मेरी सानी छोरीलाई ..। मेरी छोरी..मेरी कान्छी...,मेरो बाबा.. कहां जाँदैछौ..? मलाई एक्लै छोडेर..। पख न म पनि आउँछु तिमीहरू सँगै ...। ऊ दलानबाट आँगनतिर कुद्यो तर पारिघरे दाईले उसलाई च्याप्पै पकडे । उसँगै अरूपनि चिच्याइरहेका थिए । लौ न नि के गर्ने कान्छादाई तिम्रो घर त बग्यो.। तिम्रा जहान परिवार पनि गए त तिमीलाई छोडेर...। ऊ मुड्कीले छाती ठोक्दै उफ्रीरहेको थियो गुहार माग्दै ।
सबैले हेर्दा हेर्दै घर भएको पाखो नै तल तल कता पुग्यो कता..। कहीँ पनि र कतै केहि देखिएन...। ऊ मुर्छा प रेर ढल्यो । काटेको रुख जस्तै गरेर ..। कसैले उसलाई पानी छम्कन थाले कसैले पंखा हम्कन थाले । सबैको होस हवास उडेको थियो । कसैको मखमा कुुनै शव्द थिएन । सबै मुखामुख मात्र गर्थे ।
एकक्षण पछि छ्याप्पै रोकियो पानी । उज्यालो भयो सबैतिर । छ्याङ्ग देखियो वरिपरिको पाखाहरूपनि । अघिसम्म तरेली परेको उसको घर भएको पाखो र सानो चिटिक्क परेको घर भएको ठाउँ अहिले रातो रातो धमिलो खहरेमा परिणत भइसकेको थियो । वीच भागमा एक अँगालोको पानी बगेको पनि देखिन्थ्यो । सबैका आँखामा एउटै,भयभित दृष्य अल्झिरहेका थियो । कसैसँग पनि एक अर्कासँग बोल्ने शव्द थिएन ।
एकक्षण अघिको रत्यौली खेले जस्तो त्यो दलान अहिले मसान घाट जस्तै शून्य भएको थियो । धेरैबेर पछि उसको होस खुल्यो । सबैले उसलाई सहानुभूति दिंदैथे तर आंखाबाट मात्र । मुखले कस्ले के बोल्ने ? कसैसँग पनि शव्द थिएन ।
उसले बिस्तारै आफँैलाई आफैले उठायो र बस्यो । अनि पुःन उतै हे¥यो र अन’मान गर्याे कहाँनेर थियो उसको घर ? जहाँ उसकी सुत्केरी जहान भर्खर जन्मेकी सानी पतली जस्ती छोरी लिएर सुतिरहेकी थिई ? उसले फेरी जहान र छोरी सम्झ्यो । अनि भक्कानिएर आयो उसको मुटु । उसले भर्खर जन्मिएकी छोरीलाई अघाउन्जेल खेलाउन पाएको पनि थिएन । उज्यालोमा नियालेर हेर्न पाएको पनि थिएन । ऊ जस्तै थिई कि आमा जस्तै ? तर अब त त यो सबै गर्न नै परेन । उसकी अवोध छोरीले गर्भको अंध्यारोबाट धरतीको उज्यालो त देखी तर घामको उज्यालो र न्यानो स्पर्श कहिल्यै देख्न पाईन ।
एकै क्षणमा उस्को सबैथोक उजाडियो । त्यही पाखो जस्तै गरेर । ऊ भित्रको रहर,चाहना,योजना र उद्देश्य सबै थोक बगे । भित्रैदेखि रित्तो भयो ऊ । खण्डहर भयो उसको मन पनि । कुनै भावना र चेतना विहीन भयो ऊ । केवल मुटुमात्र चलिरह्यो उसको । सकि एकनासले । अनि त्यही पैरोमा बगिरहेको पानी जस्तै धमिलो रगत मात्र बगिरहेको थियो उभित्र ।
उसले आफ्नो चित्तलाई आफै बुझायो । दुई चार जना बसेका थिए उसंगै ।उसलाई सहानुभूति दिंदै । अरु सबै खेतालाहरू आ आफ्ना घर लागिसकेका थिए । उसले एकचोटि सबैलाई हेर्याे । अनि दुवै घुँडामाथि हात राखेर त्यहीं टाउको अड्यायो र टोलाइरह्यो । त्यसैबेला अघि दिउँसै पकडेर बाँधेको कुखुराले क्याँक गर्यो । सबैको ध्यान त्यतैतिरगयो । भुइँमा नीरिह भएर पछारिरहेको कुखुरालाई उसले उठायो । भयभित भएर कुखरा क्वांँं क्वाएँं गर्याे । उसले कुखुराको पँखेटा र खुट्टा बाँधिएको बन्धन विस्तारै खोलिदियो र छोडिदियो । कुखुरा खुसी हँुद क्वाएं क्वांक गर्दै फुत्त भाग्यो । मानौँ ऊ ज्यान बाँच्न सफल भएकोमा खुसी मनाउँदै । अलि पर पुगेसिछ ‘कुखरी कांँ.’...?गर्याे घाँंटी तानेर । अनि आफ्नो हुलमा मिसियो ।
पृथ्वी बुहलाए पनि आफ्नो दैनिक कर्तव्य भुलेको थिएन प्रकृतिले । त्यसैले होला ्रक्रमशः साँझ झर्न थाल्यो । अनि विस्तारै साँझ बाक्लिएर डरलाग्दो रातमा परिणत भयो । तर ऊ त्यहाँबाट उठ्न सकेन । उसको गन्तव्य थिएन । लक्ष्य थिएन । कहाँ जाने भन्ने । ऊ पांच दिन सम्म त्यो दलानबाट उठेर कतै गएन । अर्ध मूर्छित अवस्थामा नै बसिरह्यो । घरि चेतना र घरि मूर्छितको अवस्थामा ।
छ दिनका दिन भने ऊ आफू पाँच दिन अघि आएको बाटो फर्कियो । खोला तरेर पारी त लाग्यो तर आफ्नो टुंगो कहांनेर हो खुट्याउन सकेन । बल्ल बल्ल झरेको नाङ्गो भिरलाई पार गरेर निस्कियो । आधा पाटो सबै चिरिएर गएछ । उसकी जहान सुत्केरी हुंदा केही दिन अघि मात्र सुतीको साडी च्यातेर थाङना बनाएको सम्झयो उसले । हो त्यस्तै गरी धर्रर च्यातिएर गएको थियो आफ्नो अलिकति भएको पाखो बारी पनि । सर्वस्व च्यातिएर एउटा धरो जत्तिकै मात्र बांकी रहेछ ।
ऊ त्यहीँ एउटा खनिउको बोट मुनि डिलमा टुक्रुक्क बस्यो । अनि आफ्नो मझेरी कहाँनेर थियो ? जहान र छोरी कहाँनेर सुतेका थिए ? ठम्याउन थाल्यो । उसको आंत भरिएर आयो । आँखाबाट वर्रर आँसु झर्याे । ऊ एक्कासी एकचोटि चिच्याएर रोयो । आंखा चिम्लेर । त्यसैबेला उसले कसेको स्पर्श पाएजस्तै महसुस् गर्याे । चीर परिचित थियो त्यो स्पर्श । उसले आफ्नी जहान सम्झ्यो र खुसी भएर आँखा खोल्यो । किङग्रीङ्ग परिसकेको चोटै चोट लागेको उसकी जहान आउनु भन्दा अघिको एक्लोपनको साथी पाँग्रे आँखाबाट आँशु झार्दै उसँग लुटपुटिरहेको थियो । चाटिरहेको थियो उसलाई । अनि पुच्छर हल्लाउंदै भनिरहेको थियो “अहंँ म तपाइँलाई छोडेर जान सक्तिन मालिक । म त्यति बेइमान हुन सक्तिन । आएँ म फर्केर ..।” उसले यस्तै भाव बुझ्यो पाँग्रेको आत्मियताबाट ।
“यसैगरी मेरी कान्छी पनि काखमा छोरी बोकेर आए त हुने नि ..।” यही आशले होला सायद उसले पूःन आँखा चिम्ल्यो । मनले कसैको प्रतिक्षा गरिरह्यो चनाखो भएर । तर अहँ निकैबेर सम्म पनि उसको काँधमा कसैले स्पर्श गरेन । धैर्य र सान्त्वनाको हात कसैले बढाएर “नानीको बा ...।”भनेन । बरु एउटा कागे किरो उड्दंै आएर उसको गालामा बस्यो । झसङ्ग भएर उसले आँखा खोल्यो । पांग्रे उसको क्रियाकलापलाई मान्छेलाई झंै अचम्म मानेर हेरिरहेको थियो अलिक पर बसेर । केही दिनको मायाँ लगाएर गए पापीनीहरूले ..। मनमनै भन्यो उसले अनि एकहातले आँसु पुछ्यो र अर्काे हातले पांग्रेलाई बोलायो । पांग्रे खुसी हुंदै आयो र उसलाई चाट्न थाल्यो । उसले पनि पांग्रेलाई अङ्कमाल गर्याे ।
उसले त्यो ठाउँ छोडेर जान सकेन । न त आफ्नी जहान र छोरीको याद नै भुल्न सक्यो । पांग्रे त फर्कैर आयो भने ...? त्यो त पशु थियो । त्यसले त बिर्सिएन भने ...?यही भ्रम बोकेर बाँच्न थाल्यो ।
पोहोरको सम्झनामा हराएकोले उसको हातमा नै जलिसकेछ बिंडी त । एकसर्काे तानेको पनि याद छैन उसलाई । हातमा ठूटो मात्र थियो त्यो पनि निभिसेको । तलतल मेटिएकै थिएन । आँखाहरू कतिखेर देखि बर्सिरहेका रहेछन् । आज झण्डै एकवर्ष भइसक्यो उसले यसै गरी पिंडिमा बसेर आमाछोरीको बाटो हेरेको तर खै..?
उसले अस्कोटको फेर उचाल्यो र आँखा पुच्छ्यो । अनि खुइय सुस्केरा हालेर उठ्यो र भित्र पस्यो । आगो पार्याे । यसपटक दुई चार चोटि ठोस्दैमा आगो टिप्यो झुलोले । अनि अलिकतिले बिंडी सल्कायो र बाँकी एउटा झुम्रोमा सल्कायो । केही क्षण पछि त्यो झुम्रो सल्कियो र पुत्पुताउन थाल्यो । दिउँसो बटुलेर ल्याएको झिरिमिटि हाल्यो र अँगेनामा आगो सल्कायो ।
झमक्क साँझ परिसकेको थियो । उसले आँटमा राखेको टुकी सल्कायो । मुसुक्क गर्याे उसको मझेरी र भित्तो । दुई हात जोडेर ढोग्यो साँझको बत्तिलाई । अनि अँगेनाको डिलमा टुक्रुक्क बस्यो । आज उसको मन भारी भएको थियो । केही क्षण आघि उसको स्मृतिमा पोहोर सालको घटना दोहोरिएको थियो । जहान र छोरीको याद दुख्ने गरी नै आएको थियो उसलाई ।
बाहिर पानी परिनै रहेको थियो घनघोर । लगातार उसैगरी । ऊ भित्र पसेपछि पांग्रे पनि लुसुक्क भित्रै छिरेर दैलो नेर अंगेनापटि फर्केर बसिरहेको थियो ।
उसलाई के गरौँ कसो गरौँ भयो । भुँडीमा भोक पनि थियो । एक बर्षका धेरै दिन त उसले आमा छोरीको याद चपाएर नै बसेको थियो । आफनो भोक साट्थ्यो उनहिरूकै यादमा । उसले पुलुक्क हेर्याे पाँग्रेतिर । पांग्रेले पुच्छर हल्लायो । –‘असाध्यै भोक लागेको छ मालिक’ भनेझैँ लाग्यो उसलाई । नभएका आफन्तको यादमा बसेर भएका आफन्तलाई पनि भोकै राख्न मन लागेन उसलाई । पहिले यदाकदा वा संधै जसो नै भोकै राखेकोमा पनि पश्चाताप लाग्यो उसलाई । पाँग्रेप्रति माया लाग्यो । उसले ओदान गाड्यो अँगेनामा । कराही बसायो र पानी हाल्यो । झिरिमिटी थप्यो अंगेनामा । पानी स्याँ गरेपछि अघि ल्याएको पीठो तीन डाडु थालमा निकाल्यो र एक हातले उम्लँदै गरेको पानीमा हाल्यो र अर्काे हातले पन्यु समातेर मस्काउन थाल्यो । एकचोटि सबै पल्टाएर मस्कायो समेटेर एकै डल्लो बनायो र थालले छोपिदियो । पुलुक्क पाँग्रेतिर हेर्याै । अब त पाक्यो पख है एकक्षण भन्नेको भावमा । पांग्रेले बुझ्यो कि सायद एकचोटि खुसीले पुच्छर हल्लायो र मुख मिठ्यायो अनि मुखमा भरिएका पानी घ्टुक्क पार्याे ।
उसले सिलौटो लडायो । ढुंँग्रोबाट तीन ढिका नुन र एउटा अकबरे झिकेर हाल्यो अनि लोहोराले करक करक पार्न थाल्यो । नुन र खोर्सानी पिस्दा सर्याक सर्याक खस्रो आवाज आउँदा उसको जिउ नै सिरिंग भयो ।
टुकीमा तेल पनि सकिएछ । धिप धिप गर्याे र भ्mयाप्पै निभ्यो । डरलाग्दो अँध्यारो घोप्टियो उसको मझेरी भर । उसले ढोका तिर हे¥यो र ‘पांग्रे’ भन्यो । पांँग्रेको आंँखा अँंधेरीमै टलक्क टल्किरहेका थिए । उसको श्वर सुनेपछि चल्मलाएको देखियो त्यो टल्केको आंखाहरू ।
उसले फेरी झिरिमिटि थप्यो अंगेनामा र फू फू गर्न थाल्यो । आगो हुुरुरु बल्यो । पूःन उज्यालियो वातावरण । त्यही उज्यालोमा उसले दुई चोइली ढिंडो पस्केर थालमा हाल्यो । पन्युको कोशाले सिलौटाको नुन खोर्सानी थालको छेउमा राख्यो र अर्काे एक चोइली पांग्रेको थालमा हालिदियो । हतार गरेर खांँदा तातोले जिब्रो पोलेछ क्यारे ख्याक्क गर्याे र भुइँमा दराल्यो मुख । अनि बिस्तारै चाट्न थाल्यो डराइ डराइ ।
उसलाई भँुंडीमा भोक भए पनि मनमा एकरति पनि थिएन । त्यसैले एकचोइली जति मात्र नून खोर्सानी चोप्दै बल गरेर किक्लिक किक्लिक गर्दै निल्यो ेजबरजस्ती । अरु छिर्दै छिरेन उसलाई । अनि उसले पांग्रेतिर हेर्याे । पांग्रेले खाइसकेर मुख मिठ्याइ रहेको थियो । भए अझै खाने थिएँं भने झंै गरेर । उसले ला भनेर बोलायो सबै भुइंँमा राखिदियो । पांग्रेले मुखले टिपेर लग्यो र कप्लयाक कुपलुक पार्याे ।
झिरिमिटी पनि आहूती हाल्दा हाल्दै सकि सकेको थियो । एक चोटि फेरी उसलाई बिंडीको तल तल लाग्यो । गोजी छाम्यो । अघि बेरेर राखेको बिंडी झिक्यो र अंगेनाको भुतभुते खोतल्यो । हल्का उज्यालो भयो अंँगेनाको डील । ऊ बिंडी तान्न थाल्यो । बिंडी तानेको बेला उसको नाकको टुप्पो र जँुंगा मात्र देखिन्थे अंध्यारोमा ।
पानी डरलाग्दो परिरहेकै थियो । मझेरी र ढोकानेर पानी चुहुन थालेको थियो । हिजो अस्ति त्यत्रो ठूलो पानीमा त चुहेको थिएन ? तर आज भने कसरी चुह्यो होला..? उसले ठम्याउन खोज्यो । हिजो अस्ति ढाडिएको थियो छानो चुहेन । आजको टन्टलापुर घामले सुक्यो छानो चाउरियो पराल अनि चुह्यो । अब यसपालिको हिउंदमा चहिं जसरी भए पनि घर छाउनु पर्ला । मनमनै निर्णय गर्याे ।
ऊ बिंडी तान्दै अंगेना छेउमा पल्टियो । अस्कोटको गोजमिा भएको झुलो चकमक,ढुङ्गा र खैनीको बट्टाले बिझायो उसलाई । त्यसैले अस्कोट खोलेर सिंगौरोमा झुण्यायो ।
उसले बिंडी निभायो र ‘जई सिरी राम,नारायण रक्छे गर’ भन्दै सुत्यो । उसको मनमा शान्ति पटक्कै थिएन । घनघोर बर्षातले उही घटना पुनरावृति भइरहेको थियो । यसबेला त बाबा भनेर तोते बोलीमा भन्न थाल्थी होली छोरीले..केही नभएको भए ...। सम्झंदा पनि चरक्क भयो उसको छाती । ऊ अर्काे कोल्टो पर्कियो । स साना चीसा थोपा उछिट्टिएर उसको अनुहारमा पर्याे । उसले यसो हात छाम्यो ओच्छ्यानको वीचतिर पानी तपतप चुहीरहेको रहेछ ।
एकक्षण सम्म त चुहुला पानी । पर्न छोडे पछि त चुहुन पनि छा्ड्ला यही भन्ठानेर भित्तापट्टि भएको अर्काे सीरानी राखिदियो । त्यो चुहुने ठाउँमा । अब पानी त्यही सिरानीमा नै चुहिरयो । ऊ बेला बेला छाम्थ्यो । सिरानीमा परेको पानी उछिट्टिएर स साना थोपा ओच्छ्यानको पर पर सम्म र उसको जिउसम्म पनि परिरहेको थियो ।
ऊ एकैक्षण भाते निन्द्रामा भुसुक्क भएछ । मनमा डर,त्रास,शङ्का र भय भयो भने ढुक्क्को निन्द्रा कहाँ पो लाग्न सक्दोरहेछ र । त्यही भएर उसलाई पनि पानी कति चुहुने हो ? लुगा पनि भिज्ने हो कि भन्ने डर पनि थियो । ऊ झसंँग भएर बिउंँझ्यो र छाम्यो वर पर । पानी अझै चुहिरकेकै रहेछ । यसैबाट अनुमान लगायो बाहिर पनि पानी परिरहेकै छ । थाङनाको सिरानी ढाडिएर ढ्वास्स भएछ । त्यसको तलबाट पानी डसनाले सोस्न थालिसकेछ । उसले सुतिसुति त्यो भिजेको सिरानीलाई ओच्छ्यानबाट बाहिर हुत्यायो । अािन पानी थाप्ने भांँडो छामछाम छुमछुम गर्न थाल्यो ।
चुक घोप्टिएजस्तो अंध्यारो थियो । उसले केही पनि भेटेन । भाँडा पनि कता कता थिए । उसले एकक्षण लाई त्यही झुण्ड्याइरहेको अस्कोट झिकेर पानी चुहेको ठाउंमा राखिदियो । र भाँडा खोज्न उठ्यो । अँध्यारोमा हिँड्दा ऊ कतापटि गयो थाहा नै भएन ।ढोका छेउको गग्रेटो मा भएको गाग्रो लिन ऊ ढोका भएतिर गएको तर एक्कासि उसको नाक र निधार ड्याम्म ठोकियो झ्यालमा । तब पो थाहा भयो ऊ त झयालतिर पो गएछ । ऊ रन्थनिएर फर्कियो ।
मझेरीमा चुहेको पानीले हिलो भएको रहेछ त्यहीं चिप्लेर उत्तानो पर्याे । ऐया आमा भनेर कहिल्यै नदेखेकि वा थाहा नभएकी आमालाई एकचोटि पुकार्याे । ढाड मज्जाले बजारिएकोले एकक्षण त अररो भयो । बल्ल बल्ल उठ्यो र अररिंदै ओच्छ्यान पहिल्याउंदै आउँदा बेलुका ढिंडो पकाएर राखेको कराहीमा खुट्टाले फुटबल खेल्यो । अनि एक हातले कराही छामेर टिप्यो अर्को हातले ठोक्किएको निधार छाम्दै ओच्छ्यानमा आइपुग्यो । अस्कोट छाम्यो पुरै भिजिसकेछ । त्यसलाई निकालेर हुर्यायो एकातिर र पानी चुहेको ठाउँमा त्यहि कराही राखिदियो । कराहीबाट त चुहेको पानी उच्छिटिएर झन ओच्छ्यानको पर पर पुग्यो । कराहीमा ठेोकिएर उछिट्टिएका स साना पानकिा थोपा उसका अनुहार तिर पनि परेकेले यही अनुमान लगायो उसले ।
कराहीमा पानी एकैरति पनि नअडिएकोले त्यही भिजेको असकोट छामेर टिप्यो र त्यसमा भएका झुलो,चकमक,सुर्तीको बट्टा सबै निकालेर ओच्छ्यान मुनि घुसार्याे र कराहीमाथि राख्यो अस्कोटचाहिं । अब उछिट्टिएन पानी । विंडीको तलतल लागेर उसले बेलुका निभाएर राखेको ठुटे बिंडी निकाल्यो सिरानीमुनिबाट । अँगेनो खोेस्रियो तर झिरिमिटि झिक्राको आगो यतिबेलासम्म के जिउँदै रहोस र ? झिल्का झिल्कीको त के कुरा तातो पनि थिएन । पुःन ओछ्यानमा हात घुसार्याे र झुलो राखेको बट्टा र चकमक निकाल्यो । छामेर झूलो चकमक ठोस्न थाल्यो । तर अंध्यारोमा कहिल्यै ठिक ठाउंमा लागेन चकमक । कतिपटक औँलामा ठोकियो । निकै बेरको प्रयाश पछि बल्ल बल्ल झुलोले आगो टिप्यो । झुलोमा आगो चम्के जस्तै चम्क्यो उसको मन पनि । अनि उसले कानमाथि सिउरिएको बिंडी निकाल्यो र ओठमा च्यापेर सल्कायो ।
ऊ पुःन गाग्री लिन उठ्यो । मुखमा भएको बिंडीको उज्यालोले बाटो खोज्दै । यसपटक भने उसले गाग्रो लिएर आयो र अस्कोट निकालेर कराहीमाथि राखिदियो । अब भने ऊ ढुक्क भयो किनभने गाग्री त हत्तपत्त भरिंदैन चुहेको पानीले ।
ऊ बिंडी नसकिँदै सावधानी पूर्वक पल्टियो ओच्छ्यानमा । एक हातले गाग्रो समाएर हल्लायो लड्छ कि भनेर । दह्रैगरी अडिएकै लागेकोले एकप्रकारले ढुक्क भयो र अर्काेपटि फर्केर सुत्यो ।
पानी एक तमासले परि नै रहेको थियो । रात चकमन्न र सुनसान थियो बेला बेलामा गड्यागं गुडुंग गर्नु बाहेक । पांग्रेको खाने थालमा बलेंसी झर्दा ट्याड. ट्याड. टुड. टुड.बाहेक केही नौलो आवाज थिएन ।
निकेबेर सम्म उसको मनमा द्वन्द चलिरह्यो । आजको यो पानीले के के गर्ने हो । यहि सोच्दैथियो ओच््यानमा त धेरै फैलिसकेछ पानी । उसको ढाडमुनिनै चिसो भयो । एकक्षणसम्म त ऊ त्यही चिसोमा नै सुतिरह्यो । आफ्नो तातोले तात्ने आशामा । उसलाई वाल्यकालको याद आयो । ओच्छ्यान भिजाएर त्यही चिसोमा सुतिरहेको .,आमाको डरले ओभानोतिर पनि नसरेको । अझ एकदिन को घटना त कहिल्यैपनि बिर्संदैन । एकदिन त उसले पनि ओच्छ्यान भिजाएर डरले त्यही चिसोमा सुतिरहेको थियो भाइले पनि भिजाएको रहेछ । आमाको आँखा पहिले भाइमा परेकोले उ, बच्यो । भाइले गरेको सु ले नै उसको पनि कट्टु भिजेको भनेर आमाले भाइको पिंडुला पड्काउंदा ऊ मख्खपरेर हांसेको थियो । त्यो सम्झे्र हाँस्यो अहिले पनि ।
केहीबेर पछि उ, चिसो नभएपटि सर्याै र खुट्टा पनि खुम्च्याएर सुत्यो । यसो झकाउन आँटेको थियो ,उसलाई जाडो भयो । भिजेको ओच्छ्यान पानी परेको वातावरण चिसो नै थियो । उसले खुट्टा मुनि पट्टि बाट तन्ना तान्यो र नभिजेको पटि ओड्न खोज्यो । उसले यसबेला होसै राखेन । पानी चुहीराखेको छ र ओच्छ्यानमा गाग्री पनि थापिराखेको छ भन्ने । तन्ना तान्दा सबै सोहोरिएर आयो कराही पनि पल्टियो र कराहीमाथि राखेको गाग्री पनि । धेरै भईसकेको पानी फेरी ओच्छ्यानमा छताछुल्ल भयो । अर्काे छेउपटि सम्म पुग्यो ।
“ थुइक्क बुद्धि..।” आफंैलाई धिक्कार्दै उठ्यो र टकटकायो पानी तर थोरै मात्र बाहिर गयो पानी धेरै त डसनाले नै सोसिसकेको थियो । पानी पर्न कम भएछ कि केहो अहिले त पानी पनत्यिति चुहेको जस्तो नलागेकोले उसले फेरी गाग्री थापेन । एकक्षण त्यत्तिकै बसिरह्यो के के सोचेर ..। तर रातभर ऊ राम्ररी निदनाउन नै पाएको थिएन । अाँँखा झप झप गर्न थाल्यो । हातले एसो छामेर गोडामुनिपटि नभिजेको छेउमा सर्यो । जाडो जाडो पनि भएकोले उ त्यही डसना मुनिघुस्रियो । थाङनाको डसना भिजेर बाफीएको ठस ठस िगन्हायो उसलाई । त्यसैले मुखबाट मात्रैे सासाफेर्ने प्रयास गरेर सुतिरह्यो ।
बिहानको प्रहर थियो । ऊ पनि मस्त निन्द्रामा थियो एक्कासी अनौठो खालको आवाज आयो । गुरुरुरुको । पांग्रे पनि चुइकिंदै ऊ भए ठाउँमा गयो र ढाडपटि टाँसियो । ऊ तन्द्रामा थियो । उसले आज आफ्नो डंडेल्नोमा यस्तो तातो स्पर्श पाएको थियो करिब एक वर्ष पछि । उसलाई मीठो लाग्यो त्यो तातो स्पर्श । मख्ख पर्दै ऊ तरङ्गिन थाल्यो अनि हात बढाएर यसो छाम्यो । पाँग्रेको नाकमा पुग्यो उसको हात । नाक चिसो लाग्यो । झसंग भयो ऊ। उसकोे तन्द्रा टुट्यो । उसलाई एक प्रकारले रिस पनि उठ्यो पांग्रेसंग । तर तुरुन्तै दया पनि पलायो । माया लाग्यो र गम्लङ्ग अँगालो हाल्यो । एक चोटि झिलिक्क अनि चर्रर गर्न थाल्यो आवाज झन नजिक नजिक आयो ।
उसको स्मृतिमा पुःन पाहोर साल पारिघरबाट देखेको दृष्य दोहोरियो । यस्तै आवाज आएको थियो त्यस बेला पनि । मुटु ढुक्क भयो । जहान र छोरी देखिए त्यस दृष्यमा । उसले झन दह्रो गरी च्याप्यो पाँग्रेलाई । चरर्रको आवाज झन ठूलो बढ्दै गयो । जमीन,घर नै सबैे हल्लिएको अनुभव भयो उसलाई अँंध्यारोमै भए पनि । आवाज झन बढ्दै गयो र सललल बग्दै गयो घर ओच्छ्यान् सबै । सिलिली खेल्दैछु जस्तो लाग्यो उसलाई । के हुंदैछ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो भएन उसलाई । अझै जोडले च्याप्यो पांग्रेलाई । केही क्षण पछि उसको घर पनि कर्याक कुरुक गर्याै । टाउकोमाथि घरको छानो गल्र्याम्म खस्यो । आफू तल तल कतै खाँेचतिर पुगेजस्तो लाग्यो । उसको नाकसम्म पानीले छोप्यो ऊ निसास्सीयो । बल गरेर सास फेर्न खोज्यो तर बिस्तारै हिक्क भयो । केहीबेर पछि एक अर्काको आलिंगन बद्ध भएको पांग्रे र उसको अंगालो क्रमशः चिसो हुंदै गयो ।
भोलि पल्ट हेर्दा उसको भन्ने कहिं कतै केही चीनो र चपरी पनि बांकी थिएन ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक भाेलि राष्ट्रिय सभामा
डा. केसीकाे स्वास्थ्य अवस्था शिथिल
काठमाडौं : सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ५५ जना सचिवलाई समायोजन गरेको छ । सबै सचिवलाई केन्द्रमा नै रहने गरी यथास्थानमा समायोजन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । ...
जनकपुर : धनुषामा जन्ती चढेको बसमा करेन्ट लाग्दा ९ जनाको ज्यान गएको छ भने ३० जना बढी घाइते भएका छन् । शुक्रबार साँझ धनुषाको सबैला नगरपालिकास्थित ४ पटेरवा भन्ने गाउँमा जन्ती चढेको ...
5th Feb 2019 पिएसजे न्युज
रौतहट: ५३ बर्षअघिको महेन्द्र राजमार्गको जमिन नै ब्यक्तिको नाममा पास भएको खुलासा भएको छ । पुर्ब पश्चिम राजमार्गको क्षेत्रफल रहेको जमिनको कित्ताकाट नगरिकनै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले ब्यक्तिको नाममा ...